रोचक/बिचित्र Archives - Jhimruk Post::No 1. Nepali News Portal
बेलायती वैज्ञानिकहरूले एउटा अनौठो तथ्य पत्ता लगाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इंगल्याण्डका वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अनुसन्धानबाट च्याउनले समेत एक अर्कामा कुराकानी गर्न सक्ने तथ्य पत्ता लागेको हो । यतिमात्र होइन च्याउसँग ५०...
बिन बहादुर रेग्मी प्युठानी चुनाव आको छ,आऊनुस एकै छिन गफ गरौ।आजकल भट्टिपसल चियाँपसल, चौतारी, दोबाटो घुम्टी त्यतिमात्रै होईन फेशबुक टवीटर सामाजिक सञ्जालमा यिनै गफहरू हुने गरेका छन्। गफ गर्ने तरिका सैली प्लेटफर्म भने केही फरक...
एजेन्सि १० माघ, काठमाडौं । एउटा व्यक्तिले जिवनमा कतिपटकसम्म चुनाव हारेपछि थाक्छ होला ? कतिपयका लागि त चुनावमा उठेर हार्नु भनेको सामान्य दैनिकी जस्तो हुँदो रहेछ र हार्ने कुराले कहिल्यैपनि थकाई लाग्दो रहेनछ । कतिपयले चुनाव...
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नं. १ नयाँगाउँमा अवस्थित पर्यटकीय स्थान झल्याकोटलाई धुर्कोट गाउँपालिकाले ढुङ्गे बगैँचाको रुपमा स्थापित गर्न लागेको छ । यस ठाउँ अति रमणीय र ढुङ्गै ढुङ्गाले प्राकृतिक र आफैमा यस ठाउँ सौन्दर्यताले...
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयता खारेजीका लागि देशका सातवटै प्रदेशमा विरोध सभा गर्ने भएको छ । राजमोको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले देशब्यापी संघर्षका कार्यक्रमसहित सातै प्रदेशमा विरोध सभा तय...